Inbadan oo Iibsashada Xashiishadda Sharciga ah ee British Columbia • Drugs Inc.eu
Tan iyo markii dowladda federaalka Kanada ay sharci u siisay cannabis madadaalo dabayaaqadii 2018, nidaamka cusub waxaa lagu dhalleeceeyay dadka reer Canada oo sii wada iibsashada alaabada xashiishadda laga helo ilo sharci-darro ah. Si kastaba ha noqotee, sawirkani wuxuu u muuqdaa inuu isu beddelayo iyada oo isticmaaleyaal badan oo ku nool British Columbia ay u jeedinayaan cannabis sharci ah.
Kanada dhexdeeda, qaab dhismeedka warshadaha xashiishadda sharciga ah ayaa shaqeynayay in kabadan hal sano iyo badh. Dawlad goboleed kastaa waxay heshay xukunka sharciyada maxalliga ah ee la xidhiidha waaxda cusub, oo ay ku jiraan xadaynta da'da iyo rukhsadaha.
Daraasado badan oo laga sameeyay dalka oo dhan waxay muujiyeen heshiis guud oo la xiriira go'aanka sharciyeynta daroogada. Tusaale ahaan, sahan Oktoobar 2019 oo ay sameysay Research Co. ayaa lagu ogaaday in 64% dadka deggan British Columbia ay oggolaadeen sharciyeynta, marka la barbar dhigo 29% oo diiddan. Daraasad dhowaan soo baxday ayaa lagu ogaaday in oggolaanshaha waaxda cusubi ay ahaatay mid adag oo xitaa kor u kacday ilaa boqolkiiba 70.
Akhri wax dheeraad ah canex.co.uk (Source, EN)
Dhimashada ku xeeran faaruqinta 'layaab ma leh', ayaa uu ku leeyahay suuqa madow
Mareykanka - Dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka jira Mareykanka ee ku xeeran "xanuunka uumiga" wuxuu saameeyaa dhammaan ummadda ...